ကတ်ထူပြားနှင့် ကတ်ထူပြား | လက်မှုပညာ On
Alicia tomero | | လက်မှုပညာ, ကတ်ထူပြားလက်မှုပညာ, ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ, ပြန်လည်
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင် လိပ်ပြာ ဒါကတော့ ကလေးတွေအတွက် မြန်ဆန်ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ လက်မှုပညာတစ်ခုပါ။ Recycle လုပ်လို့ရတာကြောင့် သဘောကျမှာပါ။ ကတ်ထူပြားပြွန် အချို့ကို အသုံးပြုပါ။ ကတ်ထူပြား။ အချို့သော pompoms နှင့် ပိုက်သန့်စင်ဆေး အနည်းငယ်ဖြင့် သင့်အား စွဲဆောင်မည့် ဤအံ့သြဖွယ်တိရစ္ဆာန်လေးများ ဖန်တီးနိုင်သည်။
1 လိပ်ပြာတွေအတွက် ငါသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေ
5 စတုတ္ထအဆင့် -
ကြီးမားသောကတ်ထူပြွန် သို့မဟုတ် သေးငယ်သောပြွန်နှစ်ခုကို ဖြတ်ရန်။
ပန်းရောင်နှင့် လိမ္မော်ရောင် အလင်းရောင် acrylic ဆေး။
အရောင် ၄ မျိုးနဲ့ စုစုပေါင်း ၈ ရောင်ပါတဲ့ Pom Pom အကြီးကြီး (ခရမ်းရောင် ၂ ရောင်၊ ပန်းရောင် ၂ လုံး၊ အစိမ်း ၂ ရောင်၊ အပြာ ၂ ရောင်)။
သေးငယ်သော pom-poms2ရောင် (အဝါရောင်2နှင့်လိမ္မော်ရောင် 2) ။
ပန်းရောင်နှင့် လိမ္မော်ရောင် ပိုက်သန့်စင်သူများ။
ငါတို့နှစ်ယောက်လုံး ပန်းချီဆွဲတယ်။ ကတ်ထူပြားပြွန် နှင့် acrylic ဆေးသုတ်. တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အရောင်မတူပါဘူး။ သုတ်ဆေးကို အခြောက်ခံပြီး လိုအပ်ပါက နောက်ထပ် သုတ်ဆေးတစ်မျိုး ထပ်လိမ်းပါ။
ကတ်ထူပြားကို ကတ်ထူပြားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကတ်ထူပြားကို ချထားပါ။ အတောင်ပံ. ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏တောင်ပံဖြစ်မည့်အရာကို လက်ဖြင့်တစ်ဖက်ပေါ်တွင်ဆွဲကာ၊ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဘေးတွင်ကတ်ထူပြွန်ပါရှိသည့်အတိုင်း တိုင်းတာမှုပိုမိုကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ လိပ်ပြာတစ်ကောင်အတွက် ပန်းရောင်ကတ်ထူပြားပေါ်တွင် မတူညီသောအတောင်ပံနှစ်ခုနှင့် အဝါရောင်ကတ်ထူပြားပေါ်ရှိ အခြားအတောင်ပံတစ်ခုကို အခြားပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့်ရေးဆွဲသည်။
ကျွန်တော်က ဆွဲတယ်။ အစွန်းပေါ်တွင်ဒေါင်လိုက်မျဉ်း ဆွဲထားသောတောင်ပံ၏။ ပေတံကို မဖြုတ်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကတ်ထူပြားကိုခေါက်သည်။ ရေးဆွဲထားသော မျဉ်းကြောင်းတစ်လျှောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခေါက်ဆွဲကို အပြင်ဘက်တွင် ထားရစ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ထပ်ခေါက်ပါ။ မြင်သာထင်သာရှိ ပုံဆွဲခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကတ်ထူပြား၏ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကို လိုက်ဖက်နိုင်သောကြောင့် ထပ်နေသော တောင်ပံသည် ကျန်ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြတ်တောက်မှုကို ဖြည်ပြီး ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ပြွန်တစ်ခု (သို့မဟုတ် လည်ချောင်းကိုယ်ထည်) နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆီလီကွန်နှင့်ကပ်ထားသည်။ အဆိုပါ pompoms အတောင်များပေါ်တွင်၊ အပေါ်နှင့်အောက်နှစ်ခု။ ငါးပိလည်း ပေးမယ်။ လိပ်ပြာကောင်. ဖြတ်သွားမယ်။ ပိုက်သန့်စင်စက် နှစ်ပိုင်း လိပ်ပြာတစ်ခုစီ၏ထိပ်တွင် ၎င်းတို့ကို ကပ်ရန် (၎င်းတို့သည် အင်တာနာအဖြစ် လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်)။ ပိုက်သန့်စင်မှုတစ်ခုစီ၏အဆုံးတိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကော်တစ်ခုစီကို ကပ်ပေးပါမည်။ pom pom လေးတွေ
ပလပ်စတစ်မျက်လုံးကို ကော်ပြီး အနက်ရောင်အမှတ်အသားဖြင့် ပါးစပ်ကိုဆွဲပါ။ ပြီးတော့ ငါတို့ လိပ်ပြာတွေ အဆင်သင့်ရှိမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ » ကတ်ထူပြားနှင့် ကတ်ထူပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရယ်စရာလိပ်ပြာများ